Soo degso Sikorsky S-55 Dabayl FSX - Rikoooo
downloads 15 058
Riix halkan waayo FS2004 kala duwanaansho ku socon
Halkan waa helicopter ah oo muuqaal wanaagsan, by AlphaSim faray. Markii hore payware, tan iyo 2009 waxa ay noqotay freeware, sidaa darteed waa in aad ka faa'iidaystaan!
hawlaha xamuulka helicopter First, S 55 A H19 soo saaray shirkadda Maraykanka Sikorsky, ka dhigay ay duulimaad ay hawl-November 12, 1949. In 1952, in uu helay shahaado of airworthiness sokeeye uu.
The miisaanka iyo bulk of matoorada halka ku yaal salka garabka mamnuuc rakibo of dhufays ku helicopters rotor hal. Injineer The Igor Sikorsky lahaa fikradda ah in hooy engine ee hore oo ka mid ah diyaaradaha iyo taangiyada hoos dabaqa, tuuraya qol rakaab kor ku engine. bixinta Tani sidaas xorayn goobta of dhufays ah xuddun.
S 55 waa sida Patriots shanqadha ah saddex-wada dagan caddeeyay rotor iyo jiita, iyadoo rotor dabada laba-wada dagan iyo quadricycle tareen. Uu dhufays u ogolaanaya ku sidday ee 6 in 8 rakaab ama lix gacmeed kordhaya oo lagu daweeyo dhaawacyada inta lagu guda jiro gaadiidka.
Khiyaaneeyey ee 50s soo daahay oo ay awood badan S 58, S 55, in qoraalkii ay dad badan, waxaa la dhisay in nuqulo 1280. Waxa uu liisanka ayaa la helay by France, Japan iyo Great Britain. Shirkadda British Westland dhiibin France 42 UU 55 oo Doono dugsiga iyo GH2 (Algeria). (Source: www.museehelico-alat.com)